somalimidnimo.com » Xildhbaanno Xanaaqsan oo Sheegay in Shabaabku Dhaamaan Shisheeyaha Mahiga ku Jiro
Xildhbaanno Xanaaqsan oo Sheegay in Shabaabku Dhaamaan Shisheeyaha Mahiga ku Jiro Jul 25, 2012 - 10 Comments	Xildhibaanno xanaaqsan baa sheegay inay talada dalka ku wareejinayaan Shabaabul Mujaahidiin intii Shisheeye waddanka qabsan lahaa! Xildhibaannadaas waxaa ka mid ah Bood C/Laahi Magan, Daahir C/Qaadir Muuse, iyo C/Qaadir Sheekh Ismaaciil! C/Qaadir sheekh waa ninkii sheegan jiray inuu guddoomiye u yahay guddiga dastuurka baarlamaanka!
Nimankaan waxay si toos ah u sheegeen in Shabaab ka mudan tahay Amisom! Waxay ku sii dareen in la arki doono dad isku qarxinaya Xamar oon Shabaab ahayn! Horta iyadoon la fiirin xanaaqa ka muuqda nimankaas xildhibaananda sheegan jiray waxaa is weydiin leh: waddanka sanado ka hor baa la qabsadee; maxay tahay waxa xildhibaannadaas gacanta ugu jira ee ay ku wareejinayaan Shabaab? Waxay ku fiican tahay sidii Abshir Bacadle sheegi jiray Allaha u naxariistee in lagu dhex xiro qol xaar ka buuxo oo xiniinyaha laga garaaco!
Saan horay u sheegnnay Beesha Gaalada waa sahlatay Shariif sheekh Axmed laakiin haddaan isaga la siin ballanqaad waxay u dhowdahay in meesha lagu kala tago! Shariif sheekh Axmed wuxuu heystaa Tarsan oo ku fiican soo ururinta dumarka jidadka xaaqa iyo ciyaalka kabaha baalasha! Waxaad mooddaa in Mahiga ka faanayo inuu la heshiiyo Shariif sheekh Axmed laakiin sida muuqata waa in Mahiga inta ka haro Faroole iyo Gaas; faraqa ku xirtaa Shariif sheekh Axmed! Shariif sheekh Axmed wuxuu kaloo taageero ka heystaa Museveniga Amisom, Turkiga, Carabaha, iyo weliba odayaasha!
Marka waxaa u fiican nimanka xildhibaannada sheeganaya inay iska ceshaan Mahiga ee aysan soo galaangelin Mujaahidiinta oo aysan magacooda ka wasakheyn! Maxaa gacan ugu jirooy wareejiyaan?
« PreviousMahiga oo Ramadaanka Dastuur noo Dejinaya! Dhegeyso Culumada Ictisaam oo isku Raacay Diidmada Dastuurka iyo Gaalo-soo-wadasho!	Next »Daawo oo Dhageyso Dhooye iyo Sh C/Raxmaan Sh. Cumar oo soo Toshay Gorof ay Soomaalida Maraykan Deggen kaga Gurtaan Lacag! Iyagaa laga wada maqlay : I Don’t Care About Mogadishu iyo I Do Care About It!	10 Responses
Guhaad says:	July 25, 2012 at 3:10 pm	Dhurwaayoow maxaan MUUUUU kaa maqlay ….
Kuwan xildhibaanno maahee waa RAARDHIBAANO.
Wxayna rabaan in MUSHAARKII laga goostay looga ogolaado WAA NAAG MASAYRSAN CAADADEED
Reply	Kaafi says:	July 25, 2012 at 3:39 pm	Kkkkk walahi waa run maxey warejiyan mar horeyba dalki cadow ugacan galiyene
Reply	HARADHERE says:	July 25, 2012 at 4:52 pm	Assalaamu caleykum dhamaan bahda webkaan sameysay iyo inta xiriirka la leh ee ku taxanba.
Waxaan ka codsanayaa in eey shabaab balanqaadyo u sameeyaan ninkii odayaasha ka mid ah ama barlamaankaas ka soo goosta oo fashiliya dastuurkaas gaalada ee eysan ganaaxa loo geysanayo cidii ka qeyb gasha kaliya faafin bam se in uu amaan helayo aduun iyo aaqaraba ku daraan iclaamkooda.
Reply	waayo'arag says:	July 25, 2012 at 5:57 pm	ilaahay aya mahad oo dhan iska leh, naxariis iyo nabadgelyo nabi maxamed ha ahato korkiisa
Wa runne maxay hayaan oo soo wareejinayaan! eeyagii baa bilasharaf ah oo kuffarta amisom kuhoosjirabe.Ninka dastuur ayaan dejina yidhi dembi weyn ayu galay ee ilaahay (sbwt) ha utoobad keeno intuu nool yahay. waxay ila tahay Shareecada alle iin aan kukalabaxno ayaa igala fiican dastuur gaalo nosoqoreen.walaalaha gobislam maxa dhacay maanta sharif murtad waa kaxafiifiseen ne? Wamaxay shariif sheek axmedku.xageega waa murtad ninka gaalo ka raaca muslim. Horta Amisom wadanka hakabaxaan maarka ayaa xildhiban warkiisa la dhaqeysani.
Reply	umu_barau says:	July 25, 2012 at 6:00 pm	Boowe bal,adba arri duli wuxu, dufooba oo duf Ku baxa maxay wareejinayaan oo gacanta ugu jirra! Waa hadal,aan laga fiirsan ma umul baa nimanku sowtii waa hore ay Wadanka dhiibeen maaha, gob islaam waa Markey orran jirreen ma waxbaa loo diiday?!!!kkkkkkkkkkk gurigiin ba,.
Reply	Jibril ali jibril says:	July 25, 2012 at 6:23 pm	Asc ma waxay ilawey madaficdi nagula tumay dartood waxan maqli jiray layeela ma hilmamo lkn yela wa hilmamaa kir dher doofarada fadlan lacag ku shuba ayey maraayan birito warkale ka dhageyso amisom waa walalahayn? Tnkle somalida tamir xumada xamar 20 radio aya ka furan dhamantoda afka mahiga cidama shasheyo ayey ku hadalan meshii qof dulman muslim ah loga gargari lahaa ciyaro gaalo qurama madow wax matag ku qabanayo ayey ukal tartamayaan wlh gaalo in aay bixi doonta ee wax halarebto magacin ba.yey waxi cadaw u shaqey gob islam alle darti ayn idin jeclahay
Reply	Ummo says:	July 25, 2012 at 6:47 pm	Waa iska hadlayaal wax ay shegaan ayey wayeen markasay mujahidinta ku magacooda ku qurxisanayaan hadalka sheekadooduna waa waan socon waynee aan orodno
Reply	Zain says:	July 25, 2012 at 9:12 pm	Asc maceya wa bashir akhi waxey ilatahay nimanka hadaka leh shabab ayan kuwerejineyna wadanka sadax ayan ushegi 1 galada ad lasocoten walaga guleystay 2 munafig wey kamarman mujahidinta 3 awalbo dinti aya gadatene lacagti ad kugadaten aya nilididay waxana maqashen ninki soshego amirinta mujahidinta dolar aya lasin marka waxa tihin wa laga dharagsanyahay murtadin wadna ureysin
Reply	Wanaagjecloow says:	July 26, 2012 at 6:49 am	Kkkkkkkk markay diintii gaten o loga baxay balanqaadkoda ayey leyihiin mujahidiinta ayan kubiiraynaa kkkk waxan dhihi lahaa markay kabaxan hoygoda madaxtoyo o ay yimadan bananka waa in qoorta lagawada jaraa kuwas waayo waxkalo ay abalkuleyihin malahane on sidas ka ahayn mar haday diintoda horay ugu iibsaden besha gaalada midoway
Reply	bicolo says:	July 26, 2012 at 11:50 pm	kkakaaka ma dinta khawarijta ayey gateen diin islaam cid ma gadatee idinak dinta aa dadka ka sarataaan waa tan khawarijta din islam dad ka sarided maa shaqo ku ledihin